Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation amin'ny Evangeline Adams | Terry Nazon - Fikarohana Reincarnation
Terry Nazon dia mpanandro tena mahomby any Los Angeles sy Florida izay manana mpanjifa malaza marobe. Nahita ny tranonkala ReiincarnationResearch.com izy ary nanoratra tamiko tamin'ny 16 Novambra 2010. Notantarain'i Terry fa nanomboka tamin'ny fahazazany ny fahalianany amin'ny fanandroana. Ara-dalàna ny fiheverana fa ny fahalianan'ny Terry tany am-piandohana dia avy tamin'ny fahavelony taloha.
Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, i Ahtun Re dia nilaza tamiko fa i Terry dia mpanandro malaza amin'ny taonjato 19 izay manana mpanjifany amin'ny barôna. Nanao fikarohana vitsivitsy aho avy eo ary nahita fa misy mpanandro iray antsoina hoe Evangeline Adams izay niasa JP Morgan, sy ireo olo-malaza hafa tamin'izany vanim-potoana io. Tamin'ny fotoam-pivoriana taorian'i Kevin dia nanamafy i Ahtun Re fa i Terry dia Adams tamin'ny fotoana nahitana azy taloha.
Talenta sy fitondran-tena taloha: Ny feon'i Evangeline Adams dia feon'i Terry Nazon
Rehefa nanoratra tany amin'i Terry aho dia nizara izany vaovao izany taminy ary nanamarika fa i Evangeline Adams dia nanoratra autobiography. Nanolo-kevitra aho hamaky an'io boky io i Terry mba hahitana raha mifandray amin'ny Adams izy.
Namaly toy izao i Terry: “Andriamanitro ô! Boky novakiako izy tamin'izaho 12 taona izay nanomboka ahy… ny feony dia ny feoko. ”
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Mitovy be ny trano maritrano an'ny Evangeline Adams sy Terry Nazon.
Ny fiainana taloha talenta: Nanomboka nanao fanandroana i Terry tamin'ny faha-12 taonany ary lasa iray amin'ireo mpanandro nahomby indrindra manerantany.
Affiner Affinity: Terry nitantara fa ny boky nosoratan'i Evangeline Adams dia nanomboka ny asan'ny mpanandro tamin'ny faha-12 taonany ary ny feon'i Adams dia ny feony manokana. Araka izany, Terry dia toa nahasarika ny asan'ny fiainany taloha taloha.
Mariho fa ao amin'ny Trangam-panjakan'izao tontolo izao an'i John B. Gordon | Jeff Keene, fanadihadiana ara-pitenenana akademika iray naneho fa ny fomba fanoratan'i Jeff dia mitovy amin'ny an'i Gordon ary ny fahitako azy, amin'ny famakiana ireo antontan-taratasy nosoratan'i Gordon sy Keene, dia izy ireo dia nosoratana tamin'ny “feo iray ihany, izay mamerina ny fanambarana nataon'i Terry.